Palestina: Ny manjò ireo vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 3:08 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2007)
Na dia resaka politika tahaka ny mahazatra aza adihevitra maro ao amin'ny tontolon'ny blaogy Palestiniana, nanapa-kevitra ny hiova hevitra aho amin'ity herinandro ity. Raha tokony ho governemanta sy Gaza ary ny patriarika, ny fiodinana amin'ity herinandro ity dia hijery ny ny lohahevitra isan-karazany – lohahevitra momba ny vehivavy aho.
Ny voalohany dia ny tantaran'i Hind Mohammed Eid, tovovavy Ejiptiana iray izay voaolana sy niteraka zaza, ka nitarika adihevitra manerana ny firenena mikasika ny hijab ho fiarovana amin'ny heloka bevava toy izany (misy lahatsoratra momba ity tantara ity amin'ny teny arabo ato) Improvisations: Arab Woman Progressive Voice niady hevitra momba ny raharaha:
Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny fanolanana sy ny fanaovana voaly?
Eny, toy izao ny lojika momba ny patriarka: raha nisy nanolana ny tovovavy iray na vehivavy iray dia satria nihantsy izy. Tsy rakotra tanteraka izy ary noho izany dia fahadisoany izany. Ka ny tovovavy 7 taona izay voaolana no omena tsiny. Na farafaharatsiny, ny ray aman-dreniny no omena tsiny satria navelany hihanjahanja izy, ka nanome fakam-panahy ny lehilahy hanolana azy.
Araka io lojika io dia tsy maintsy manao voaly ny tovovavy mba hiarovana ny lehilahy amin'ny fakam-panahy. Ny lehilahy no lasibatra.
Manolana ankizivavy vao herintaona ireo mpanolana. Tokony hanarona voaly ireo mpanome fakam-panahy ireo ihany koa ve isika? Manolana lehilahy sy zazalahy ny mpanolana. Nahoana isika raha manarona voaly azy ireo ihany koa?
Andeha isika hanarona voaly izao tontolo izao mba hiarovana ireo mpanolana amin'ny faikam-panahy. Saromy voaly ny hazo, asio voaly ny ranomasina, ary aza adino ny rivotra satria mety mamoha filan'ny nofo avokoa ny rehetra, mety ho ara-nofo ny rehetra, mety hampidi-doza ny rehetra.
Nahatonga adihevitra mikasika izay mety hanakana ny fanolanana, ankoatra ny voaly ny fanehoan-kevitry ny bilaogera iray. Qwaider قويدر nanamarika hoe:
Amin'io lafiny io, tena mankasitraka ny lalàna jordaniana aho amin'ny fampidirana ny fanamelohana ho faty noho ny fanolanana zaza tsy ampy taona (tsy maninona na lahy na vavy). Heveriko fa mety hahomby amin'ny fanakanana ireo olana ireo ny fiantraika goavana tahaka izany.
James Stanhope namaly hoe:
Ao Etazonia, ny lalànam-panjakana momba ny heloka bevava no mamaritra ny fanolanana olon-dehibe samy olon-dehibe sy olon-dehibe manolana tanora (fanolanana noho ny sata ananana), ary satria saika ny mpitsara foana no nanapa-kevitra tamin'ireo raharaha ireo, tsy mazava raha fomba hanakanana izany ny fanamelohana ho faty. Ao amin'ny fanjakana Amerikana any Géorgie, izay misy ahy, mampiseho ny fanadihadiana fa tsy mahasakana ireo nahavita heloka bevava izay nomanina mialoha sy misy herisetra mahery vaika ny fampitandremana amin'ny sazy (anisan'izany ny fanamelohana ho faty) satria manantena ny tsy ho hita na tsy ho tratra ireo nahavita heloka.
Raising Yousuf, Unplugged: diary of a Palestinian mother dia bilaogy iray tena mahaliana izay vao niverina taorian'ny fiatoana fohy. Renim-pianakaviana Palestiniana ilay bilaogera izay manoratra ny fiainany ho toy izany; Ao amin'ity lahatsoratra ity izy miresaka momba ny fialana ao Gaza sy ny olana atrehiny:
Nandany 14 ora nandreraka niampitana izahay, miaraka amin'ireo Palestiniana an'arivony maro hafa, izay mamoy fo na mandao na miditra ao amin'ny Tetezantany. Mifandimby ny fiara fitaterana, fianakaviana manontolo sy ny zanany ary ny vadiny no mirazorazo amin'ny tafo, nianjera tao anatiny, na niparitaka teny amin'ny entana aoriana. Torana ny sasany. Ny hafa lasa nisavoritaka toy ny adala. Manana ny antony ny tsirairay. Nisy renim-pianakaviana nisaraka tamin'ny vadiny. Mpianatra mila miverina any amin'ny oniversite. Ny marary. Ny zokiolona. Ary ireo izay tsy misy marika manokana hamantarana ny diany, zony anefa izany, na inona na inona.
Ny ijanonantsika amin'ity herinandro ity dia ny KABOBfest,, izay misy ny resadresaka momba ny rakikira an-tsarin'i Hilary Duff, Stranger. Manakiana ilay horonantsary ho orientalista (miompana loatra amin'ny tatsinanana) ilay bilaogera:
Ny horonantsary mozikan'i Hilary Duff, “Stranger” nofinofy orientalista velona – izay ifangaroan'ny singa ara-kolontsaina Arabo, Afrika Avaratra ary Indiana ao anaty fahitana natambatra amin'ny “Atsinanana Ekzotika ” diso ara-nofo loatra, no mahatratra ny tampon'ny tabilao rehetra ka manakorontana ny loto hivoaka amiko.
Sarim-behivavy ao amin'ny sisintany Rafah avy amin'ny Raising yousuf, Unplugged: diary of a Palestinian mother